Nkwado DMCA | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ndị na-esonụ na-akọwa Nkwado DMCA maka My okporo ụzọ blog website.
WordPress maka ndị mbido 2021: Ntuziaka Nzọụkwụ Nzọụkwụ Iji Nweta WordPress
09/22/2021 10:46 elekere GMT
Anyị na My okporo ụzọ blog kpebisiri ike ịzaghachi ihe ọ bụla a sịrị na ha mebiri ikike nwebisiinka, ọ bụrụ na ha emee. Rịba ama nke mmebi iwu ọ bụla ekwesịrị iji ụdị nke US Digital Millennium Copyright Act chọrọ ka ekpughere na http://www.copyright.gov.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla megidere ikike nwebisiinka nke ndị ọzọ mejọrọ, anyị nwere ike wepu ọdịnaya ahụ na My okporo ụzọ blog, gbochie ịnweta ya, kwụsị ma ọ bụ gbochie ohere maka ndị na-ahụ maka ọdịnaya ahụ, na / ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ e weere dị ka ihe kwesịrị ekwesị. Anyị nwekwara ike ịgafe ndekọ nke ihe ahụ mere maka akwụkwọ na / ma ọ bụ mbipụta nke ndị ọzọ na nghọta anyị.
Ọ bụghị Ndụmọdụ Iwu / Enweghị Mmekọrịta Onye Ọkachamara
Ọ bụrụ na ị kwenyere na emebila ikike gị, ọ nwere ike bụrụ nnukwu okwu. Ihe ngosi DMCA a dị naanị ka anyị wee nwee ike ime mgbalị anyị, dika website ndị nwe, igbochi na iwepu ịda iwu na ikike ikike ọgụgụ isi. O nweghi ihe ozo iji dochie anya enyemaka ndi oka iwu. Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ na omume, dịka megide onye na-ahụ maka ịntanetị (ISP), nwere ike ịdị. Inwere ike ichọ enyemaka onye oka iwu ozugbo.
Maka ọdịmma gị na iji ọsọ ọsọ ọsọ, ọkwa nke mmebi iwu ebubo nwere ike ibunye na My okporo ụzọ blog site na email, jiri adreesị ozi-e na / ma ọ bụ ozi ịkpọtụrụ enyere na nke a website. Anyị na-adọ aka na ntị na ị ga-akwụ ụgwọ maka iwu ọ bụla na iwu ọ bụla na-emebi emebi, yana ụgwọ ụlọ ikpe na ụgwọ ọka iwu, ma ọ bụrụ na ị ghae ụgha na azọrọ ikike gị. Enweelarị onyinye nrịba isii maka mkpesa ụgha, yabụ na-adụ enyemaka nke onye ndụmọdụ tozuru etozu.
Ka e were ya na ị ka chọrọ ikwupụta mmebi iwu nwebisiinka, ịkwesịrị inye ihe ndị a iji mee ka usoro a dị ngwa:
Nzọụkwụ 1. Chọpụta ihe zuru oke nke ihe nwebisiinka nke ị kwenyere na emebi emebila, site na ịnye URL ahụ na ọrụ echekwara, ISBN #, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
Ntụpụ aka 2. Chọpụta URL nke ibe weebụ ị na-ekwu na ọ na-emebi ọrụ nwebiisinka edepụtara na ihe nke # 1 dị n'elu.
Ntụpụ ụkwụ 3. Nye onwe gị ozi kọntaktị maka onwe gị (adreesị ozi-e kachasị mma, ekwentị na-atụ aro).
Ntụpụ ụkwụ 4. Nye ozi zuru oke iji nye anyị ohere ịgwa onye nwe ya / onye nchịkwa nke ebubo mebiri webpage ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ dị ka blog ma ọ bụ nnọkọ nnọkọ (adreesị ozi-e kachasị mma).
Ntụpụ ụkwụ 5. Gụnye okwu ndị a: “Enwere m ezigbo okwukwe na iji ihe nwebisiinka nke akọwara dị ka iwu emebighị ikike nwebisiinka, ndị ọrụ ya, ma ọ bụ iwu.”
Ntụpụ ụkwụ 6. Gụnyere na-esonụ kwuru: “M na-a swearụ iyi, na ntaramahụhụ nke ajụ iyi ụgha, na ozi dị na ngosi na-ezi ezi na m bụ onye nwebisiinka nwe ma ọ bụ na ikike ka m na-eme na nnọchite nke onye nwe nke nanị ikike nke a na-kwuru mebiri. . ”
Ntụpụ ụkwụ 7. Nọmba na-abanye aka na nkwenye gị.
Akwụkwọ Mgbasa Ozi
Rịba ama na otu na-anọchite anya ndị emetụtara website ma ọ bụ onye na-eweta ọdịnaya nwere ike ịdepụta nkwupụta ọkwa n'okpuru ngalaba 512 (g) (2) na (3) nke Digital Millennium Copyright Act, yabụ anyị nwere ike biputere ma ọ bụ jikọta ọdịnaya ahụ n'okwu ahụ.
Maka ọdịmma gị, a ga-enyefe ọkwa ngosi site na email, na iji adreesị ozi-e na / ma ọ bụ ozi ịkpọtụrụ nyere na weebụsaịtị a. Anyị na-adọ aka na ntị na ị ga-akwụ ụgwọ maka iwu ọ bụla na iwu ọ bụla metụtara iwu, yana ụgwọ ụlọ ikpe na ụgwọ ọka iwu, ọ bụrụ na ị gha ụgha na-azọrọ na emebighị ikike nwebisiinka ndị ọzọ.
Ka e were ya na ị ka na-achọ idetu ihe ngosipụta, ịkwesịrị inye ihe ndị a iji mee ka usoro a dị ngwa:
Nzọụkwụ 1. Chọpụta URL ma ọ bụ ihe ọmụma nchọpụta pụrụ iche nke ihe anyị wepụrụ ma ọ bụ nwee nkwarụ.
Ntụpụ ụkwụ 2. Nye aha gị, adreesị gị, akara ekwentị, adreesị ozi-e, na nkwupụta nke ị kwenyere na ikike nke oflọikpe Federal District maka mpaghara ikpe ebe adreesị gị dị, na ị ga-anabata ọrụ nke usoro site n'aka onye ahụ onye nyere ọkwa n'okpuru obere edemede (c) (1) (C) ma ọ bụ onye nnọchi anya ụdị onye ahụ.
Ntụpụ ụkwụ 3. Gụnyere na-esonụ kwuru: “M na-a swearụ iyi, n'okpuru ntaramahụhụ nke ajụ iyi ụgha, na m nwere ezi okwukwe na a na-ewepụ ma ọ bụ nwee nkwarụ ọ bụla nke ọdịnaya n'elu dị ka a N'ihi nke a ndudue ma ọ bụ misidentying nke ihe na-ewepụ nwere nkwarụ, ma ọ bụ na ewepụrụ ma ọ bụ nwee nkwarụ nke onye mkpesa mere ka ọ mata na URL ahụ agakwaghị egosi. ”
Ntụpụ 4. Dijitalụ bịanye aka na nkwenye ahụ.
Gbanwee ọkwa: Dịka ọ bụla gbasara nchịkwa na usoro iwu anyị peeji nke, ọdịnaya dị na ibe a nwere ike ịgbanwe na oge. N'ihi ya, peeji a nwere ike ịgụ dị iche iche maka nleta gị ọzọ. Mgbanwe ndị a dị mkpa, ma rụpụta ya site na My Traffic Blog, iji kpuchido gị na weebụsaịtị My Traffic Blog. Ọ bụrụ na ibe a dị gị mkpa, ị kwesịrị ịlele ugboro ugboro n'ihi na ọ nweghị ọkwa ọzọ nke ọdịnaya gbanwere ga-enye tupu ma ọ bụ mgbe mgbanwe gbanwere.
NDỌ AKA NA NTOP: Nke iwu na nhazi peeji nke na weebụsaịtị a, gụnyere nke a, onye ọka iwu ejirila ịdị uchu dezie ya. Anyị na My Traffic Blog akwụgoro ikikere iji ojiji iwu na nhazi peeji nke na My Blog okporo ụzọ maka nchedo gị na nke anyị. Enwere ike iji ihe a n'ụzọ ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla yana ejiri ikike na-egbu egbu site na Copyscape iji chọpụta ndị na-emebi iwu.
09/22/2021 10:48 elekere GMT